पञ्चायती रूपको प्रदेशभन्दा दुई तहको सरकार नै जाति हुन्थ्यो : वडा अध्यक्ष महर्जन | Ratopati
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १, २०७६ chat_bubble_outline4
काठमाडौँ । राज्य सञ्चालनको नवीन प्रणालीको सुरुवातसँगै देश सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत एकात्म राज्य सञ्चलनको पद्धतिबाट देश विकेन्द्रीकृत हुँदै अहिले सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । तीन तहको राज्य सञ्चालनको व्यवस्थासँगै अहिले देश ७ प्रदेशमा विकेन्द्रीकृत भएको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, मध्यमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहने गरी कुल ७६१ निकाय संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
तर सङ्घीयताको विषयमा यी तीनै तह गम्भीर हुन नसक्दा यतिखेर सङ्घीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सङ्घीयताको सवालमा तीनै तह एकमत देखिँदैनन् । तथापि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तह उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
भूमिकाका हिसाबले सङ्घीयता सफल बनाउन स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कसरी काम गर्लान् र के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा हामीले केन्द्रित छौँ । स्थानीय निकाय त्यो पनि वडाबाट सकारात्मक कदम चालेका एक उदाहरणीय पात्र हुन् वडा प्रमुख श्री गोपाल महर्जन ।
महर्जन ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ का वडा प्रमुख हुन् ।
गुड गभर्नेन्सका उदारणीय पात्रसमेत मानिएका वडा प्रमुख महर्जन वास्तविक जनप्रतिनिधि मानिन्छन् । सेवा सुविधा र विकासलाई जनमुखी बनाएर अघि बढेका महर्जनले आफ्नो वडालाई नमुना वडा बनाएका छन् । वडालाई प्रविधिमैत्री बनाउने पहिलो जनप्रतिनिधि पनि उनै हुन् । उनले आफ्नो वडामा पेपर लेस अभियान चलाएका छन् । त्यस्तै वडाभित्र सीसी क्यामेरा जडानदेखि आवश्यक स्थानमा सडकल बत्तीहरु समेत जडान गराएका छन् ।
महर्जनको योभन्दा पनि अझ चर्चित कार्यक्रम घरघरमा जनस्वास्थ्य सेवा अभियान हो । उनले आफ्नो क्षेत्रमा ल्यमिन ब्याग अर्थात् झोलामा प्रयोगशाला अभियान चलाएका छन् । यार्सा ग्रुपसँगको साझेदारीमा उनले वडामा निःशुल्क जनस्वास्थ्य सेवा चलाएका हुन् । वडामा ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई घरमै गएर स्वस्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको परिचालन गरेका छन् भने वडामा एमबीबीएस डक्टरसहितको स्वास्थ्य सेवा परामर्श केन्द्रको व्यवस्थासमेत गराएका छन् । यो अभियान चलाउने महर्जन नै पहिलो अभियनता हुन् । यसले उनलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ ।
त्यति मात्र होइन, महर्जनले आफ्नो वडामा २४सै घण्टा उपलब्ध हुने गरी शव वाहान सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन् । यो सेवा प्रदान गरेबापत वडाले सेवाग्राहीबाट ५ सय रूपैयाँ लिन्छ । तर महर्जन, त्यो शुल्कमा थप दुई हजार थपेर २ हजार ५ सय रूपैयाँ उल्टै सेवाग्राहीलाई दिन्छन् । ता कि परिवारजन गुमाएको परिवारलाई केही राहत होस् ।
महर्जन जनसेवामा पूर्ण बफादार छन् । बिहान ७ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म नै जनसेवामा नै खट्ने गर्छन् । आफ्नो कार्यलयमा सेवाग्राहीलाई कुनै खालको समस्या नहोस् भनेर काममा छिटो छरितो हुने गरी कर्मचारी र कार्यप्रणाली बसालेका छन् ।
एक कामका लागि बढीमा १५ देखि २० मिनट मात्र समय लाग्ने गरी प्रवन्ध मिलाएको महर्जन बताउँछन् ।
‘वडामा काम लिएर आउने सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला बेहोर्नु पर्दैन । काममा चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरेका छौँ । सेवा ग्राहीले बढीमा २० मिनेट समय कुर्नु पर्ला ।’ महर्जन भन्छन्, ‘हामीले कार्यालयमा मिलाउन भन्ने शब्द बहिष्कारको नीति लिएका छौँ । कार्यालयमा सेवाग्राही, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि कोही कसैले पनि मिलाउन भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्दैनन् । त्यसो त हामीले कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कोठा व्यवस्थापनसमेत एउटै हलमा गराएका छौँ । यसले भ्रष्टचारलाई निरुत्साहित गर्ने मेरो बुझाइ हो ।’
जनप्रिय जनप्रतिनिधि महर्जनले आफ्नो वडाबासीलाई सेवामा सहजताका लागि सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाट गराउँछन् । दर्ता प्रक्रियादेखि सिफारिसमा समेत यो विधि अपनाएका छन् । बाँकी चलानीमा पनि यो सिस्टम चाँडै भित्र्याउने उनको योजना छ । सेवाग्राहीको सबै लागत कम्प्युटर सिस्टममा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छन् । ता कि पछि काम गर्न सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो होस् ।
त्यति मात्र होइन, वडा कार्यालयमा दृष्टिविहीनमैत्री डिजिटल अडियो वडापत्रसमेत राख्ने महर्जनको योजना छ ।
‘आँखा देख्नेहरुका लागि छ कार्यालय अघि ठूलो अक्षरमा बडापत्र छ । तर दृष्टिविहीनहरुले कसरी थाहा पाउने ? त्यसैका लागि वडामा दृष्टिविहीनमैत्री डिजिटल बडापत्र ल्याउँदै छौँ । जुन बडापत्रमा स्विच थिचेर दृष्टिविहीनहरुले सेवा बारे थाहा पाउन सक्ने छन्, वडा प्रमुख महर्जनले भने ।
अपाङ्गमैत्री कार्यालय तथा शौचालय त महर्जनले यसअघि नै बनाइसकेका छन् । बडापत्र पनि अपाङ्गमैत्री बनाउने उनको थप योजना हो । यसलाई छिट््टै कार्यान्वयनमा लैजाने उनको तयारी छ ।
यद्यपि महर्जनको आफ्नै पहलमा आवश्यक स्थानमा घुम्ती (मोबाइल) शौचालयसमेत राख्ने योजना छ । यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको महर्जनले बताए ।
वडाको बजेट विकास निर्माण र जनसेवामा
जनमुखी जनप्रतिनिधि गोपाल महर्जन आफ्नो वडामा आउने बजेट संयमित भएर जनसेवा र विकास निर्माणकै काममा लगाउने बताउँछन् । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन जनताले माग गरेका तर आवश्यकता र उपयोगका हिसाबका महत्त्वपूर्ण मानिएका योजनामा खर्च गरिने बताउँछन् ।
‘पहिले केन्द्रले बजेट दिन्थ्यो र जनप्रतिनिधिले आफूखुसी खर्च गर्थे । तर अहिले त्यसो हुँदैन । अहिले त जनप्रतिनिधि बजेटको सदुपयोग गराउने मात्र हुन् । योजन र आयोजना जनस्तरबाटै आउने हो । बाँकी केही विशेष योजनामा मात्र जनप्रतिनिधिले सोच्ने हो ।’ महर्जनले भने, ‘हामीले जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट हाल्छौँ ।’
यस वर्ष वडामा २ करोड ७५ लाखको बजेट परेको छ । प्राथमिकताका आधारमा ढल सफाइका लागि आवश्यक मेसिन खरिद गर्ने योजना बनेको छ । त्यसका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । वडाले लिचड, जेट र कम्प्रेसर मेसिन सहितको गाडी खरिद गर्दै छ । त्यसका लागि ८० लाख बजेट छुट्याइएकोमा नपुग २० लाख थपेको हो ।
कुल पौने ३ करोड बजेटमध्ये ८ लाख रूपैयाँ वडाले मोबाइल ट्वाइलेटका लागि छुट्याएको छ । त्यस्तै, युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि २ लाख छुट्याएको छ भने, वडाले रोजगारमूलक वा उद्यमशील कार्यक्रमका लागि बिनाधितो र बिनाब्याजको ५ लाखसम्मको स्वावलम्बी कर्जासमेत प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि वडाले वडाभित्रको आमा समूहलाई आधार बनाएको छ । अहिले वडामा यस्ता ९ वटा समूह रहेका छन् ।
बाँकी एक लाख रूपैयाँ जनप्रतिनिधि सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने महर्जनले बताउँछन् । यो कोषमा नगरपालिकाले ५० लाख र वडाले एक लाख हाल्ने गरेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह नै हो । पञ्चायती रूपको प्रदेश तहको भूमिका खासै देखिएन । विकास निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुई तहको सरकार नै जाति हुन्थ्यो ।’
अहिले हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । तीनै तह मिलेर सङ्घीयता सफल बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । तर यो काम त्यति सजिलो छैन । सबै निकाय, क्षेत्र तथा जनभावनालाई समेटेर जानु ठूलो चुनौतीको विषय हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा तीनै तह मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । तर यो मामलामा प्रदेशको खासै भूमिका नदेखिएको महर्जन बताउँछन् ।
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह नै हो । पञ्चायती रूपको प्रदेश तहको भूमिका खासै देखिएन । विकास निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुई तहको सरकार नै जाति हुन्थ्यो । यसले काम गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।’
महर्जन भन्छन्, ‘अहिले समस्या प्रदेशमा छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयन गरेको देखिँदैन । पहिलेको पञ्चायत शैलीमा प्रदेश अघि बढेको छ । विकास निर्माणका योजना तथा बजेट व्यवस्थापनमा एकलौटी रूपमा आफूखुसी निर्णय गरिरहेको छ । योजनाहरु आफ्नै खल्तीबाट झिक्ने र अघि बढाउने गरिरहेको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या ल्याउने देखिन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहहरूसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा तीन तहको संरचना फाइदाजनक छैन । दुई लेयर (तह)को सरकार भएको भए राम्रो हुने थियो । यसले काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र विकास निर्माणका कामले पनि चाँडो गति लिन सक्थ्यो ।’
जनप्रतिनिधिले तलब लिने होइन
‘जनप्रतिनिधि कर्मचारी होइनन्, जनसेवक हुन् । जनसेवा गरेबापत तलब चाहिन्छ भन्नु गलत हो । तर बिनातलब हुँदा झन् भष्टाचार मौलाउँछ ।’
महर्जन भन्छन्, ‘जनताका बीचमा भोट माग्न जाँदा नै हामीले जनताको सेवा गर्छौं भनेर गएका हौँ । यसमा तलब चाहिन्छ भन्नु सरासर गलत हो । तर बिनापैसा काममा खटिराख्न पनि सकिँदैन । त्यसका लागि राज्य सोच्नुपर्छ । बाटो खर्च, खाजा खर्च तथा आवश्यक लत्ता, कपडा खर्चलगायतका शीर्षकमा भत्ता दिनु राम्रो हुन्छ ।
महर्जन विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेकपाका वडा जनप्रतिनिधि हुन् । उनले २०३७ सालमा तत्कालीन मालेबाट राजनीति यात्र सुरु गरेका थिए । २०४९ मा पहिलो पटक स्थानीय चुनाव लडेका महर्जनले हार बेहोरेका थिए । अहिलेका सोही स्थानीय तह ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग उनको हार भएको थियो । तर दोस्रो पटकको चुनावी लडाइँ २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा भने महर्जनले जित हासिल गरे । ५४ मा प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्र श्रेष्ठलाई महर्जनले करिब ५ सय मतान्तरले हराएका थिए । त्यस पछि लामो समय सम्म स्थानीय चुनाव हुन सकेन । एक्कै चोटी २०७४ मा आएर स्थानीय चुनाव भयो । यस पटक पनि महर्जनले वडाको नेतृत्व पाए । यो उनको वडामा दोस्रो पटकको नेतृत्व हो ।
Feb. 7, 2020, 11:10 a.m. KR AJ.ACHARY
महर्जन भन्छन्, ‘अहिले समस्या प्रदेशमा छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयन गरेको देखिँदैन । पहिलेको पञ्चायत शैलीमा प्रदेश अघि बढेको छ । विकास निर्माणका योजना तथा बजेट व्यवस्थापनमा एकलौटी रूपमा आफूखुसी निर्णय गरिरहेको छ । वास्तवमा तीन तहको संरचना फाइदाजनक छैन । दुई तहको सरकार (केन्द्र र स्थानिय निकाय) मात्र भएको भए राम्रो हुने थियो । यसले काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र विकास निर्माणका कामले पनि चाँडो गति लिन सक्थ्यो ।’ कमरेड अझ अगाडी बढेर नेपाललाई जम्मा जम्मी 150 जना संसद भएको दुई सदनात्मक व्यवस्था जस्मा 30 देखि 35 निर्बाचन झेत्र कायम गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित बाट प्रधानमन्त्री हुने हुने अन्य सबै पार्टीको निर्बाचन चिन्हको प्राप्त भोटका आधारमा percentile value addition basis मा सांसद संख्या तय गर्ने पद्धति अपनाईएमा भ्रष्टाचार कम, भोट खरिद लगभग शुन्य एवं कार्यकुशलता नदेखिने साम्सदलाई सहज बिदा गरी स्वाभिमानी नेतृत्वमा सरकार निर्माण भै देशको बिकास हुन्थ्यो कि.......सबैको चेतना भया🔔🔊
Dec. 20, 2019, 6:18 a.m. Niranjan Malakar
Local Government must be under the Federal State Government But not under Center Government. Center Government Should inte interfere to Federal States and try to give order directly to local Government bypassing the states government. This is the Problem. Local Government is State government's Area. This is just Anti_Federalist's VOICE. This is Designed to make failar to Federalism. Just4Bahuns's Idea. Other just signed it without reading the constitution. Nepal need to go back to redo according to the recommendations of the First Constitutional Assembly.
Nov. 20, 2019, 7:44 p.m. sitaram basnet
दुई तहकै सरकार भएकाे भए राम्राे हुनेथियाे ।
Nov. 18, 2019, 9:14 p.m. Ratna Làl Maharjan
Briddha vatta ghar gharma gai dieko ra prokòpko bela praying garine samanko tayari saman(rescue equipment) chhutex . Sujhàb ma: wada vitra Net work vae jhanai bes(better)hun x.